Takelaka fibre gypsum ho an'ny fametahana ny gorodona - ny zava-drehetra manomboka amin'ny A ka hatramin'ny Z
Ny fanatsarana ny fahombiazan'ny orinasa rehetra dia mifandray mivantana amin'ny fampiasana fitaovana maoderina sy ny teknolojia farany. Ny fomba tsara indrindra hanambarana azy ireo dia ahafahanao mihetsika am-pahavitrihana amin'ny lalan'ny fampandrosoana sy ny fanavaozana ny toetr'andro.
Ireo orinasam-pananganana amin'ny asany isan'andro dia manolo hatrany ny drywall (GCR) fitaovana vaovao manakaiky azy amin'ny toetra, ravina fibre gypsum, GVL, miaraka amin'ny fisian'ny teknolojia vaovao amin'ny fanamboarana gorodona matevina, antsoina hoe "screed maina", dia nihanaka tamin'ny fananganana.
Izy io dia mety tsara amin'ny famaranana coatings, be mpampiasa amin'ny fanatanterahana ny asa fanarenana amin'ny gorodona, ahafahan'izy ireo manamboatra azy ireo haingana na mahomby, na manangona azy ireo indray. Mandritra izany fotoana izany dia voavaha ny olan'ny fanamafisam-peo sy ny insaka amin'ny gorodona, ny fampiononana ary ny fiarovana ny afo.
Masontsivana ara-teknikan'ny GVL
Ny takelaka voalaza dia fitaovana haingon-tsolika voapaika izay manamafy ny fibres gypsum miaraka amin'ny cellulose voapaika tsara ho toy ny binder.
Tondro ara-teknikan'ny gorodona GVL
Ny sehatry ny takelaka fibre gypsum eo amin'ny sehatry ny famokarana dia mihodina sy manodina miaraka amina latex. Izany dia mahatonga ny fitaovana hilefitra amin'ny fandotoana sy ny fizotran'ny fitsaboana natao nefa tsy nisy fampiharana ny sosona primer.
Ny fanatanterahana ny fametahana hydrophobic ny fitaovana miaraka amina latex, na ny tsy fisian'izany, dia miantoka ny famokarana takelaka GVL amin'ireto karazana manaraka ireto:
GVL mahazatra. Natao hampiasaina ao amin'ny efitrano misy microclimate maina sy mahazatra. Ny fepetra takiana amin'ny kalitaon'ireo takelaka ireo dia apetraky ny SNiP II-3-79;
GVL mahatohitra hamandoana. Natao ho an'ny asa any amin'ny toerana indostrialy sy sivily, izay marihana ny hamandoana avo.
Ny takelaka dia vokarina amin'ny habe roa mahazatra: kely-kely (10 * 1000 * 1500) ary fenitra (10 * 1200 * 2500). Ny ravina dia miova amin'ny hateviny hatramin'ny 8 ka hatramin'ny 19 mm. Aforitra ny sisin'ny ravin.
Ny mpanjifa dia omena ny kinova amin'ireo vokatra voafaritra, namboarina avy amin'ny takelaka fibre gypsum, manana hateviny roa (napetaka ao amin'ny ozinina ary omena vala izay azo atao manidy tena).
Fonosana ravina GVL tsara
Mba hahamora ny fivezivezena, ny GVL efa voaomana dia fonosina anaty harona tsy misy hamandoana. Ny tsirairay dia misy fonosana 40 ka hatramin'ny 50. Mpanamboatra fitaovana fanorenana manerantany toa an'i Knauff no fonosana 98 sheet.
Mba hiarovana ny sisiny tsy hiditra anaty tsofoka sy hiditra hamandoana mandritra ny sehatry ny fitaterana dia ampiasaina ny gasket sy palety manokana. Ny fitaovana dia mahazaka hafanana ambany, azo antoka amin'ny afo, sariaka amin'ny tontolo iainana ary mora alamina.
Ny fampiasana azy dia ahafahanao manitsy ny hamandoana amin'ny haben'ny efitrano. Afaka manome izany ny GVL na manangona azy ao aminy.
Amboarina ny gorodona amin'ny alàlan'ny ravina GVL
Ny fiainana talantalana dia voafetra ho herintaona. Raha izany no mitahiry GVL mandritra ny fotoana rehetra dia ao anaty efitrano maina ihany.
Ireo fitaovana voalaza ireo dia ampiasaina betsaka amin'ny asa fanamboarana sy fanarenana, ary koa mba hampitomboana ny fiarovana ny toerana ho an'ny tanjona anatiny sy teknika. Ankoatry ny fandaminana gorodona, ny GVL dia ampiasaina rehefa manao asa miatrika ny valindrihana sy ny fandaminana ny fizarazaran'ny rindrina.
Matetika izy ireo dia ampiasaina amin'ny plumbing sy trano iainana, ao amin'ny efi-trano sy trano fitehirizana, any amin'ny ambany rihana sy ny tafo. Ny fepetra takiana lehibe indrindra dia ny famantarana ny hamandoana ao amin'izy ireo dia tsy mihoatra ny fitopolo isan-jato.
Ireo fananana miaro amin'ny lelafo dia mahatonga ireo takelaka ireo ho safidy tsara ho an'ny vatan'ny ascenseur. Ny fanoherana ny hamandoana voajanahary dia mahatonga azy ireo mety ampiasaina amin'ny garazy sy ny fandroana. Ny tondro mahery dia mahatonga ny GVL ho safidy tsara amin'ny fandaminana fitsarana sy gym.
Ny tombony ara-pitaovana
Ny fotony nametrahana ny takelaka fibre gypsum dia azo atao lafika fisaka (gorodona hazo, vita amin'ny beton mihamafy, sns.). Ny fitaovana dia azo ampiasaina amin'ny gorodona ambanin'ny tany, ny insulation, na ny fotony hamitana ny gorodona.
Ny gorodona GVL dia azo ampiasaina amin'ny fametrahana lamina, tile, sns.
Ny fahaiza-mampiasa dia ampiasaina amin'ny alàlan'ny masontsivana teknika misy ao amin'ny GVL:
Mora ny manodina ny fitaovana;
Manana hery sy hamafisana mitombo;
Maneho fiarovana azo antoka amin'ny afo;
Miasa ho toy ny fitaovana insulated hafanana avo lenta;
Fanoherana ny maripana ambany;
Fampitomboana ny fahombiazan'ny insulateur;
Fiantohana ny hamandoana tsara indrindra ao amin'ilay fotodrafitrasa;
Fampiasana tsy misy fotony.
Fandaminana ny gorodona amin'ny fampiasana teknolojia "maina"
Matetika, miasa amin'ny fanomanana gorodona ho an'ny gorodona vita amin'ny firakotra vita amin'ny rindrina dia misy ny fandaminana ny screed, izay ahafahanao manasokajy ny fotony, manaisotra azy, mampitombo ny fananana insulateur ary manome ny henjana ilaina.
Ny screed, tanterahina amin'ny fampiasana simenitra simenitra, dia teknolojia somary maloto, izay misy asa tanana maro be. Tena lava ny fotoana, satria mitaky fiatoana lava amin'ny asa izy ireo mba hahatratrarana ny fanamainana simika tanteraka ny vahaolana narotsaka.
Raha takiana amin'ny 2 sosona ny screed dia mihombo koa ny fotoana voalaza. Aorian'ny fanamainana tanteraka dia ahitany ¼ amin'ny fahaizan'ny fiterahana rehetra. Ny safidy dia mitaky fandaniam-bola fanampiny amin'ny fividianana fitaovana fanamafisam-peo ho an'ny gorodona, hiantohana ny viscosity ilaina sns
Fangaro maina maina vonona ho an'ny fandaminana screeds amin'ny alàlan'ny tabilao fibre gypsum dia be fangatahana amin'ireo mpanorina matihanina. Antsoina hoe "maina" izy io.
Ny screeds toy izany dia vahaolana teknika tsy azo soloina amin'ny fandaminana ny:
Ny gorodona maditra (miaraka amin'ny fampiasana insulate) ho an'ny insulate sy ny haavony (ny hatevin'ny gorodona dia mitombo hatramin'ny 30 mm);
Ny gorodona ifotony, misy fonosana mametaka tanimanga mivelatra, misy insulation ampy (mitombo hatramin'ny 20 mm ny hatevin'ny gorodona);
Screeds prefabricated, ny insulation izay, ankoatry ny tanimanga nitarina, dia natao koa tamin'ny takelaka polystyrene nitarina. Ny safidy dia takiana. Raha toa ny gorodona voalohany dia misy tsy fitoviana lehibe, na rehefa misy fepetra takiana ambony amin'ny insulate-ny.
Ny teknolojia screed maina mamela ny mpamitaka, aorian'ny fandaminana azy, handroso amin'ny gorodon'ny rakotra voalohany.
Ireo masontsivana ara-teknikan'ireo takelaka voalaza ireo dia manome fotoana fampiasana ny mastika sy ny lakaoly, izay, amin'ny fananan'izy ireo simika, dia ampifanarahana amin'ireo fitaovana nanaovana ny takelaka fibre gypsum.
Dingana fametrahana fametrahana gorodona amin'ny plasterboard gypsum
Fametrahana gorodona GVL
Amin'ny dingana voalohany, ny asa dia entina hanomanana ny efa misy. Amin'ny tranga misy ny gorodona hazo, dia manamafy ny takelaka misy gorodona mba hialana amin'ny valin-kasika, izay no antony nahatonga ilay renirano voalaza etsy ambony. Raha mivaingana ny firakotra, dia ampy ny manala ny fako sy mamafa azy.
Rehefa avy niofana ny screed, eo ambonin'ireo fitaovana maina, aorian'ny fametahana azy dia apetraka ireo takelaka. Ity asa ity dia misy dingana maromaro: kasety manokana vita amin'ny volon'ondry basalt, isolon, na foam no apetraka miaraka amin'ny rindrin'ny rindrina (perimeter) iray manontolo, ny tena tanjon'izy ireo dia ny handemotra ny fiovan'ny mari-pana amin'ny refy geometrika amin'ilay screed tsy misy manimba azy;
Ny velaran-tany natao ho an'ny screed dia rakotra ravin-tsarimihetsika PE maromaro (overlap), ny fisian'izany dia manome sakana etona ary manao ny asan'ny sosona tsy tantera-drano; naseho ny torolàlana, izay azo ampiasaina andry hazo, na mombamomba an'i Al, izay arotsaka ny fitaovana mamorona screed maina.
Ho fanampin'ny tanjona voalaza, ireo singa ireo dia manao asa roa hafa: izy ireo dia ampiasaina ho toy ny fanilo amin'ny haavon'ny haavony, izy ireo no fototry ny fihiketana ireo takelaka hapetraka.
Mba hampihenana ny fihinanana screed maina, raha manao haavo lehibe ny fotony, dia arotsaka mialoha ny sosona iray misy fasika tanimanga nivelatra. Ary avy eo vao fenoina ilay fitaovana, toy ny Belarusian Compavit.
Raha ilaina ny manao ilay screed voalaza miaraka amin'ny insulat miaraka amin'ny gorodona, dia apetraka eo ambaniny ny sosona insulate, fibrous na foamed.
Mandritra izany fotoana izany dia atao ny fizarana ny fifandraisana, izay, raha ny filazan'ilay tetikasa, dia tokony hapetraka ao ambanin'ny gorodona. Mandritra izany fotoana izany dia apetraka ny gorodona mafana.
Apetraka ny laharana voalohany amin'ny ravina. Ho an'ny fandaminana azy dia voafidy kinova kely misy endrika GVL. Ny fametrahana dia tanterahina manaraka ny efitrano. Raha be ny insulation, dia manomboka amin'ny zoro akaiky indrindra amin'ny varavarana fidirana ny asa. Amin'ny tranga misy marika hafa misy insulated, dia nozairina avy teo amin'ny rindrina mifanohitra amin'ny fidirana ny takelaka.
Ny takelaka dia raikitra amin'ny visy nipaipaika ny tenany, ny halavany dia voafantina raha raisina ny tondro: ny hatevin'ny GVL + 10 mm. Ny takelaka mameno ny laharana manaraka dia tapaka amin'ny antsy, jigsaw na hacksaw. Raha omena ny gorodona maromaro amin'ny takelaka fibre gypsum, dia apetraka amin'ny fomba mitovy amin'ny biriky ihany ny tsirairay avy. Izany hoe, miaraka amina offset 300 - 400 mm.
Amin'ireny toerana misy ny polyurethane foam ireny mivoaka ivelan'ny faritra voalaza amin'ny GVL dia tapaka izy. Ny fenitra dia mamela ny fisian'ny seams amin'ny toerana misy glued joint of sheet, ny sakany dia tsy tokony hihoatra ny roa milimetatra. Ny lakaoly voahidy mandritra ny famatrarana ireo velarana mifamatotra dia tsy maintsy esorina koa.
Raha misy ny fampiasana ny sosona faharoa amin'ny takelaka fibre gypsum, dia apetraka amin'ny sosona voalohany (miaraka amin'ny zoro 90 degre), efa notsaboina teo aloha tamin'ny PVA, na tamin'ny karazana mastic adhesive. Ny safidy fametrahana lay roa sosona miaraka amina ravina famokarana orinasa roa sosona dia omena. Amin'ny tranga misy ny takelaka fibre gypsum dia mivalona amin'ny sisiny, dia mivondrona mitovy amin'ny teknolojia fanamafisana laminate ny habakabaka.
Amin'ny tranga takiana ny gorodona ny sosona fahatelo, dia efa vitaina amin'ny takelaka mahazatra miaraka amin'ny fanampin'ny sosona akora vita amin'ny foam. Ny hatevin'ity farany ity dia tokony hitovy amin'ny hatevin'ny fitambaran'ireo sosona roa napetraka teo aloha.
Asa farany. Ny loha mitendry tena dia miverina mibontsina ary misy kofehy efa misy. Aorian'izany, rakotra primer ny tampony, noho izany dia tratra fisaka tanteraka ny fotony voaomana. Izay rakotra gorodona dia apetraka eo amboniny.
Tombony amin'ny gorodona maina
Voalohany indrindra, ny fahaizany miovaova. Ny fandaminana ny screed voalaza etsy ambony miaraka amin'ny fampiasana plasterboard gypsum dia manome ny finisher hanana fotoana hampiasaina, ho toy ny farany, rakotra gorodona misy karazany (tile, laminate, sns). Ny fahazavan'ny rafitry ny fototra iray manontolo sy ny heriny dia mijanona tsy miova.
Fametrahana gorodona GVL:
Izy io dia tanterahina amin'ny dingana voalohany amin'ny asa atao ao amin'ny toerana;
Atao ao anatin'ny fotoana fohy, satria ny lanjan'ireo takelaka dia tsy mihoatra ny 18 kg;
Amin'ny lafiny teknolojia dia karazana asa misy amin'ny ankapobeny izy io;
Ahafahanao mahazo ny haavon'ny ambonin'ireo sy ny vatan'ny takelaka fibre gypsum ho an'ny fametrahana manaraka izay rakotra gorodona voafantina;
Milamina tanteraka ny tontolo iainana. Raha amin'ny asidra, ireo fitaovana ireo dia azo ampitahaina amin'ireo an'ny hoditr'olombelona;
Maneho fanoherana ambony akanjo;
Avela mandritra ny taona ny fametrahana;
Mahazaka entana mavesatra mifantoka;
Amin'ny haavon'ny gorodona napetraka dia manohitra tsara ny fiparitahan'ny afo misokatra;
Tsy misy ferana ny fampiasana.
GVL voafantina tsara dia antoka iray fa hotanterahina amin'ny kalitao takiana ny asa. Mba hamenoana azy dia mila manaraka ireto toro-hevitra manaraka ireto ianao:
GVL voafantina tsara dia antoka iray fa hotanterahina amin'ny kalitao takiana ny asa. Mba hamenoana azy dia mila manaraka ireto toro-hevitra manaraka ireto ianao.
Ny fitsipika voalohany amin'ny fisafidianana gorodona GVL
Zahao ny naotin'ny mpanamboatra GVL.
Ny tarehimarika avo indrindra amin'ny tsena anatiny dia ny an'ny mpamokatra Alemanina Knauf, izay, nanomboka ny taona 1993, dia nanao fampiasam-bola lehibe tamin'ny toeram-pamokarany manokana napetraka tany Rosia sy ireo firenena CIS. Niorina tao Bavaria (Alemana), ny orinasa dia efa ela no lasa iray amin'ireo mpanamboatra fitaovana malaza indrindra manerantany, ao anatin'izany ny GVL. Ny fonosana vokarin'ny mpanamboatra voatondro (ary eo amin'ny takelaka aorin-damosina) dia misy tombo-kase manga vita amin'ny loko tsy mety maty, izay misy ireto fampahalalana manaraka ireto: ny karazana tabilaon'ny fibre gypsum, ny sisiny, ny refy geometrika ary ny fenitra ao amin'ny mifanaraka amin'izay namokarana ilay fitaovana.
Ny mpanamboatra ny GVL toy ny "GYPROC" dia manana laza ambony eo amin'ny orinasa. Ity orinasa Skandinavianina ity dia mamatsy vokatra ny tsena, ny fitomboan'ny tanjany dia azo amin'ny alàlan'ny additives mineraly izay manao asa manamafy.
Toetoetra lehibe sy ny haben'ny taratasy GVL
Fampisarahana plasterboard misy varavarana
Fametrahana sy fametrahana fantsona avy amin'ny rindrina maina
Karazan-tsarimihetsika amin'ny gorodona, teknolojia
Posted in fananganana sy fanamboarana
64 fangatahana ao amin'ny angon-drakitra novokarina tamin'ny segondra 0,832.